Kudhirowa sarudzo nzira dzave nyore nekutenda kuEASYRECRUE | ECommerce nhau
Kudhirowa sarudzo maitiro ave nyore nekutenda kuEASYRECRUE
Eva maria Rodriguez | | Zvechokwadi uye nhau, StartUps uye vanamuzvinabhizimusi
EASYRECRUE ichangomhara muSpain nechinangwa chekuita digitization maitiro ekusarudza, kubatsira makambani kuwana tarenda rakanakisa nenzira isinganetsi uye yedhijitari. EASYRECRUE mhinduro dzinobvumira kubvunzurudzwa kwevhidhiyo, zvese zvakamisikidzwa uye kurarama, zvinogadziriswa zvizere nemutsara wakajeka uye zvido zvekambani imwe neimwe uye kutsiva kubvunzurudzwa kwefoni. Nenzira iyi, vanyoreri vanowana vanokodzera mumatanho ekupedzisira ehurongwa.
Kutenda kuEASYRECRUE, Dhipatimendi reHuman Resources richakwanisa kudzikisa kusvika pa50% yenguva yekutsvaga tarenda uye chengetedza kusvika kuma500 euros pamaitiro.
1 Fambisa nzira dzekusarudza uye chengetedza mari
2 Mashandisiro anoita EASYRECRUE
3 Zvakanakira EASYRECRUE
Fambisa nzira dzekusarudza uye chengetedza mari
EASYRECRUE inopa mhinduro nyowani yekuitisa mabvunzurudzo evhidhiyo, mukati meSawaS (Software seSevhisi) maitiro ayo anotendera kukwidzirisa pre-sarudzo chikamu chemabasa ekushandisa. Pakati pekusarudzwa kwekutangazve uye kubvunzurudzwa pachako, EASYRECRUE inopa yakanakisa nzira yekuita digitize uye kugadzirisa maitiro, ichideredza yakatorwa mitengo kusvika pamazana mashanu euros.
Kutenda kune ichi chishandiso, chakanyatsogadziriswa zvichienderana nekombiki yekambani graphic tambo uye nezvavanoda, iyo nguva yekufanosarudzwa maitiro inogona kudzikiswa kusvika pa50%, sezvo nhare dzakatsiviwa neaya mavhidhiyo mabvunzurudzo, ayo Anogona kukwikwidza kunze mukati memazuva ekupedzisira anoratidzwa nekambani.
EASYRECRUE timu yeSpain, yakagoverwa pakati peMadrid neParis, ine boka rakakura revanyanzvi mukutora, manejimendi manejimendi, dhizaini uye chirongwa uye IT. Inotungamirwa naPablo Calvo naGuillermo Palacios Pelayo, anoona nezveEASYRECRUE yekuSpain.
“KuEASYRECRUE tine chokwadi chekuti tarenda rakanakisa rinogara rakaoma kuwana. Ndichiri kuUnited States idzi mhando dzemapuratifomu dzave kubatsira vanyoreri kuwana vakwikwidzi vakanakisa kwemakore akati wandei, muEurope, uye kunyanya kuSpain, kuhaya nyanzvi hazvibatsiri maturusi edhijitari anowanikwa kugadzirisa uye kugadzirisa maitiro esarudzo ", anodaro Mickaël Cabrol, CEO weEASYRECRUE. "Isu tinotenda kuti EASYRECRUE ndiye mubatsiri akakwana wevashandi vekutsvaga vashandi, sezvo zvichibatsira kutsvaga vakwikwidzi vakanaka pamabasa avo, kuchengetedza kusvika makumi mashanu kubva muzana yenguva yavaizoshandisa vachifona pamberi pekusarudzwa. Kutenda nekugadziriswa kwakanyanya kwechishandiso, makambani anovandudza yavo mhando yechiratidzo uye maonero nevari kukwikwidza ".
Mashandisiro anoita EASYRECRUE
Kutenda kune yakapusa interface yeEASYRECRUE, vanyoreri vachakwanisa kugadzira yavo yakasarudzika yemibvunzo kune yega yega nzvimbo uye kukoka vanenge vachidairwa vakapindura kune kumwe kupihwa neemail.
Mubvunzo remibvunzo, iyo yese mibvunzo inowanzo gadziriswa panguva yekutanga-kusarudzwa inogona kugadzirwa: kukodzera chinzvimbo, kurudziro, kuwanikwa, nezvimwe. Uye zvakare, kuongororwa kwehunyanzvi kunogona kuwedzerwa nemibvunzo yehunyanzvi kana mitambo-yemitambo.
Icho chinoshamisa ndechekuti mumibvunzo yemibvunzo iwe unogona kumisikidza mibvunzo yevanoda kukwikwidza kuti vapindure pavhidhiyo, vachikwanisa kuratidza kupfuura CV yavo.
Kune avo chikamu, mumiriri anokwanisa kubatana kune yakachengeteka EASYRECRUE interface uye nekupindura nevhidhiyo, zvinyorwa kana sarudzo dzakawanda kumibvunzo yavakagadzirira, mukati menguva yakatarwa. Nenzira iyi, muchengeti haangokwanisa chete kuongorora nekuongorora kurekodha kakawanda sezvavanoda, asi zvakare nekutenda kune EASYRECRUE kubatirana chikuva, ese nhengo dzeboka dzakazvipira kune yekuhaya maitiro anozokwanisa kuzviwana uye kuongorora iyo mumiriri.
EASYRECRUE inotsvaga nzira dzakawanda dzekuongorora kunyorera mabasa izvo zvinobvumidza zvikwata kuongorora nenzira yakanakisa vavhoterwa vakapindura mubvunzo. Nenzira iyi, vachengeti vachange vaine pekupedzisira kubvunzurudzwa ivo nyanzvi dzavari kunyatsotsvaga.
EASYRECRUE zvakare ipuratifomu inoshanduka-shanduka iyo inogona kuchinjiswa kune chero kambani uye inogona kushandiswa mukusarudza maitiro emayunivhesiti uye mabhizinesi incubators.
Iwo makuru mabhenefiti eEASYRECRUE chishandiso ndechekuti inobvumira:
Kubata maapplication mahombe nenzira yakapusa uye isingadhuri.
Iyo inobvumidza mumiriri kuti vazviratidze ivo vega kupfuura kwavo CV uye zvirinani kuti vaone hunyanzvi hwavo chaihwo hwekuhaya mukwikwidzi akakodzera kwazvo.
Tora tarenda rakanakisa kubva kune yega yega yekusarudzika maitiro nekutenda kune yayo yekubatira kuongorora system.
Sevha 50% munguva uye € 500 mumitengo muchikamu chekutanga-kusarudzika pane imwe nzira.
Iva unokwezva uye usiyanise mushandirwi brand kubva kumakwikwi.
Kuti uwane rumwe ruzivo shanya www. .muroins.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Kudhirowa sarudzo maitiro ave nyore nekutenda kuEASYRECRUE
IMPACT ichaisa mari inosvika mamirioni e6,4 muEuropean nhare dzeInternet kutanga nekwavo kechitatu kuvhura
SPark, iyo yakabhadharwa Mastercard kadhi iyo isingade account yebhangi, inosvika kuSpain